Ukukhathalela iRing yakho yokuzibandakanya - Uthethathethwano Ring Basics
Ukukhathalela iRing yakho yokuzibandakanya
Ukukhathalela iringi yakho yokuzibandakanya kuqinisekisa ukuba ijongeka intle ngaphambi nangexesha lomtshato, kwaye iyanceda ukuba ihlale ingubutyebi obunokudluliselwa kwisizukulwana kuye kwisizukulwana. Ngokufunda ukuyicoca, ukuyigcina, kunye nokunakekela umsesane wakho, unokuqinisekisa ukuba iqhubeka ijongeka intle kwaye ihlala ikwimeko entle kuyo yonke iminyaka yomtshato.
Ukukhusela iRing yakho yokuzibandakanya
Uyisusa nini iRingi yakho
Kuphephe ukunxiba iringi yakho xa ubhukuda, kuba iminwe yakho inokuncipha okwethutyana kumaqondo obushushu apholileyo, ivumele ukuba iwe.
Thatha iringi yakho ngaphambi kokuba uthathe inxaxheba kwezemidlalo okanye komnye umsebenzi onamandla onokuthi ubandakanye ukubethwa ngamandla.
Susa umsesane wakho ngaphambi kokufaka uthambiso olunzima, into yokuthambisa, okanye iikhrim ezandleni zakho ukunqanda ukwakheka okugqithileyo okunokuthoba amatye.
Susa umsesane wakho wokuzibandakanya ngaphambi kokuqala ukucoca indlu okanye umsebenzi weyadi obandakanya imichiza erhabaxa okanye izixhobo ezirhabaxa.
Ukugcina umkhondo weRing yakho
Beka umsesane wakho kwindawo enye, nekhuselekileyo yonke imihla ukunqanda ukubeka ngempazamo kuyo.
Kunqande ukususa okanye ukubeka iringi yakho kufutshane neendawo ezisengozini, ezinjengeesinki okanye iibhafu, apho zinokuthi zikhutshwe khona lulahle.
Ngalo lonke ixesha gcina iringi yakho yokuzibandakanya ngokwakho kwindawo ekhuselekileyo ukunqanda ubucwebe ekukhutshweni okanye ekutyhafisweni ngamanye amatye anqabileyo.
Ukugcina umsesane wakho
Yiphathe iringi yakho ngokufuthi, njengoko ioyile esezandleni zakho zinokuwacoca amatye kwaye zinciphise ukuqaqamba kwazo.
Coca iringi yakho ubuncinci kube kanye ngeveki ukuze uyigcine njengeqaqambileyo njengosuku owaqala ngalo ukuyifaka.
Yenza umsesane wakho uhlolwe ubuncinci kabini ngonyaka ngumthengisi wezacholo oqinisekileyo ukuqinisekisa ukuba useto lukhuselekile.
Ngaba kukho naluphi na ulungiso olucetyiswe yijewler yakho olwenziwe kwangoko.
Ukuqinisekisa ngotyalo-mali lwakho
Ngaba uvavanyo lweringi yakho yokuzibandakanya luhlaziyiwe rhoqo kwiminyaka embalwa kwimeko yelahleko.
Khusela iringi yakho yokuzibandakanya exabisekileyo kubusela, ilahleko, okanye ukonakala ngengozi.
Iingcebiso zokuCoca iRingi
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukunxiba iringi yokuzibandakanya ngelixa uhlamba izandla zakho yindlela eyaneleyo yokuyicoca. Ngapha koko, iisepha kunye nezinye izinto ezicocekileyo ezisetyenzisiweyo ezandleni zakho zinokulibazisa kwaye ziyenze buthuntu iringi yakho, kwaye kufuneka icocwe rhoqo ukuyigcina ikrelekrele.
Iifoto zeMississite Engagement Rings kunye neeBhendi zoMtshato
Uthethathethwano ngeeNgcaciso zokuHamba kwesilayidi
Imifanekiso yeeRandi zeDayimani yokuzibandakanya
Yenza ngokwakho ukucoca
Eyona ndlela ilula yokucoca iringi yedayimani sisisombululo samanzi kunye nesicocisi esincinci samanzi. Ibrashi ethambileyo enebhrastile inokukhulula ukungcola kunye nelaphu elithambileyo, kwaye ilaphu elingenanto linokusetyenziselwa ukomisa. Izisombululo zezinto zokuthenga ezivenkileni zingasetyenziselwa ukufunxa imisesane yedayimani kunye nezisombululo zeammonia kunye neethyl alcohol. I-Amoniya (kwisisombululo esimnene esinamacandelo amathathu amanzi) ilunge ngokukodwa ngokuqaqamba kwegolide etyheli, kodwa akufuneki isetyenziselwe iidayimani ezizaliswe kukwaphuka njengoko kunokubangela ukuba iidayimani zibenamafu okanye zibe nebala.
Imisesane yokuzibandakanya nayo inokucocwa ngokufanelekileyo ukuba iba mdaka kakhulu. I-Ultrasonic kunye ne-steam cleaners zezona zikhetho zithandwa kakhulu phakathi kwejewelers. Iidayimani zinokubiliswa kwi-asidi ye-sulphuric yingcali ukuba zingangcola kakhulu, nangona oku kuhlala kuyindlela yokugqibela. Ukuba iringi yakho yokuzibandakanya inazo naziphi na iimpazamo ezinkulu, nangona kunjalo, njengokuqhekeka okanye ukuqhekeka kwilitye, qiniseka ukuba i-jeweler iyabazi kuba iindlela ezithile zokucoca zinokuzandisa iimpazamo.
Ukukhetha iNdlela eyiyo
Ukuba iringi yakho yokubandakanya ineentlobo ezahlukeneyo zamatye, qiniseka ukuba yeyiphi na indlela oyikhethayo yokucoca efanelekileyo kubo bonke. Ieperile, umzekelo, zithambile kwaye zithambe ngakumbi kunamatye anqabileyo amaninzi, kwaye zinokukrwitshwa lula okanye zidityaniswe ngokucoca izisombululo ezicetyiswe iidayimani.
Iingcebiso ngoGcino lweeRingi
Ukukhuselwa kumonakalo nobusela kufanele kube zezona zinto zixhalabisayo xa ugcina iringi yakho yokuzibandakanya. Nazi iingcebiso ezimbalwa zokugcina umsesane wakho ngokukhuselekileyo.
Iibhokisi zobucwebecwecwe kufuneka zifakwe kwilaphu elithambileyo, kodwa yazi ukuba ibhokisi yezacholo ebonakalayo yindawo yokuqala umntu oza kujonga kuyo.
Isangqa sokubandakanya idayimane kufuneka sisongelwe kwilaphu elithambileyo kwaye sibekwe kwingxowa enezacholo yokugcina izinto ixesha elide.
Kungcono ukugcina ubucwebe obunqabileyo kunxitywa kwibhokisi ekhuselekileyo.
Ungaze ugcine ubucwebe bedayimane bukhululeke nezinye iziqwenga-iidayimane zinokukrwela ngokulula okanye ziqhekeze ezinye iziqwenga, ngelixa ukubeka igolide okanye iplatinamu kwindandatho yokuzibandakanya kungonakaliswa ngamanye amatye.
Ukunyamekela iRings engaqhelekanga
Iiringi zokuzibandakanya ezingaqhelekanga zifuna ukuthathelwa ingqalelo okongezelelekileyo ukuze zikhathalelwe ngokufanelekileyo.
ukuba uthandane njani nomntu wescorpio
Ukucaciswa kobugcisa bokuyila okanye uyilo lwefiligree, umzekelo, kufuneka ucocwe ngakumbi ukuze ususe ukungcola, uthuli, kunye nokwakha kwizicwangciso eziyinkimbinkimbi.
Iiringi zokubandakanya i-antique zifuna ukuphathwa ngokucocekileyo kwijewer eyaziwayo enamava ngamasongo amadala, angomeleleyo, kwaye kufanele ukuba aphathwe ngokucekeceke kuneringi yokuzibandakanya.
Useto lwemizuzu kunye noyilo, olufana nokucwangciswa kwepavile okanye iipateni zeCeltic, ziya kufuna ukucocwa ngokubanzi ngakumbi kunamakhonkco amancinci.
Iiringi ezimhlophe zokubandakanya igolide zifuna ukuphindwaphindwa kwamaphepha e-rhodium ebanika ukukhanya okumhlophe okuqaqambileyo, kuba ekugqibeleni iyaphela
Nokuba yeyiphi na iringi yokuzibandakanya ekufuneka uyikhathalele, owona mthombo wakho ubalaseleyo ngumthengisi wezacholo owenze okanye okuthengise iringi. Mbuze malunga nokhathalelo oluyingqayizivele kunye neemfuno zokucoca, kwaye ukuba kuyenzeka, soloko ubuyela kwelo jeweler kwinkonzo kwaye ujonge iringi yakho.
Gcina iRing yakho yokuzibandakanya ikwimeko entle
Ngemikhwa esebenzayo, ukucoca rhoqo, kunye nokugcina ngononophelo, ukukhathalela iringi yakho yokuzibandakanya kulula kwaye kuyasebenza. Ayizukuhlala iringi kuphela ngokuqaqamba kulo lonke uthethathethwano, kodwa njengoko ixabiso layo lemali liqhubeka nokukhula emva komtshato, ubuqaqawuli bendandatho buya kuhlala bukhazimla njengomhla owawubekwa ngawo emnweni wakho.
Ifoto Yobuntatheli Malunga Imibuzo Iziqinisekiso Usana Olusandul 'ukuzalwa Okwexeshana Body Art
Uluhlu lwamazwe kwaye kukho iintloko
ungakanani ubudala onokuhamba ngaphandle kwemvume yabazali
Ndingayinika ikati amoxicillin yam
Ixabiso eliphakathi lokurhweba ngexabiso
ukupheka i-turkey kwi-oven convection
uyenza njani incwadi yeskrabhu yasekhaya
baqala nini abafazi ukunxiba ibhlukhwe